अमेरीकी डाक्टरहरुको सहयोगमा धनकुटामा सुरु भयो ‘अलोवा हवाइ मिसन’::Hamrodamak.com
अमेरीकी डाक्टरहरुको सहयोगमा धनकुटामा सुरु भयो ‘अलोवा हवाइ मिसन’
धनकुटा। अमेरीकी डाक्टरहरुको सहयोगमा आजवाट धनकुटामा बृहत स्वास्थ्य सिबिर सुरु भएको छ ।गरिव असाहय र पहुच विहिनहरुका लागी धनकुटा अस्पतालमा निशुल्क वृहत शल्यक्रिया स्वास्थ्य शिविर संचालन गर्न लागिएको हो । अलोवा हवाइ मिसन नाम दिएको उक्त सिबिरको लागि बिशेषज्ञ सहित अमेरीकाका दश तथा बिदेशमा रहेका नेपाली डाक्टर गरी कुल ४० जनाको सहभागिता रहेको छ ।
सिबिर १७ गते सम्म धनकुटा अस्पतालमा संचालन हुनेछ । मेजर र माइनर अप्रेसन सहित महिलाहरुको पाठेघर, हर्निया, पायल्स, पितको पन्थरी, गाठागुठीको शल्यक्रिया र दातको उपचार गरिने आयोजक समितिका संयोजक रोशेष श्रेष्ठल वताउनु भयो । सिबिरमा मेजर, माईनर र दातको गरी करिव १ हजार ३ सयको शल्यक्रिया गरीने लक्ष लिइएको छ ।
कमलमा १३ शिक्षकलाई विदाई
केर्खा,४ बैशाख। झापाको कमल गाउँपालिकामा रहेका सामुदायिक बिद्यालयबाट सुविधा लिएर जाने शिक्षकहरुलाई गाउँपालिकाले सम्मान सहित विदाई गरेको छ । कार्यक्रममा सुविधा लिएर विदाई हुने शिक्षकहरुलाई एक कार्यक्रम गरि कदरपत्र र दोसल्ला ओढाएर सम्मान सहित विदाई...
इष्टन स्टार बोर्डिङ्गद्धारा उत्कृष्ठ विद्यार्थीहरु पुरस्कृत
दमक,२९ चैत । दमक ७ स्थित इष्टन स्टार बोर्डिङ्ग स्कुलले आज बार्षिक परिक्षाफल प्रकाशन गरि उत्कृष्ठ विद्यार्थीलाई पुरस्कृत गरेको छ । विद्यालयमा आयोजना गरिएको सो कार्यक्रममा बार्षिक परिक्षाफल सार्वजनिक गर्नुका साथै एक सय बढी विभिन्न...
लोटसको अभिभावक दिवश तथा दिक्ष्यान्त समारोह सम्पन्न
बिर्तामोड । झापा बिर्तामोड स्थित लोटस पृ स्कुल एन्ड चाइल्ड के यर सेन्टर ले अभिभावक दिवश तथा दिक्ष्यान्त समारोह बिबिध सास्कृतिक कार्यक्रमको आयोजना गरी मनाएको छ । बिर्तामोड नगरपालिकाका शिक्ष्या प्रमुख युबराज पान्डेको प्रमुख आतिथ्य...
दोष दिने, होच्याउने, हकार्ने, अरुसँग तुलना गर्दा वालवालिकामा नकारात्मक असर पर्छ
बुद्धशान्ति । ज्योति अंग्रेजी मावि बुद्धशान्ति ३ ले परिवर्तित सामाजिक परिवेश, प्राविधिक गतिविधि, सामाजिक सञ्जाल तथा सञ्चार माध्यमको बढ्दो प्रयोगले वालवालिका, अभिभावक र विद्यालय बीचमा सन्तुलन ल्याएर समय अनुकुल गुणस्तरीय शिक्षालाई कसरी निरन्तरण दिन...
बाबुछोरी मृगौला पीडित ,परिवारद्धारा याचना
गौरादह ,१२ चैत । झापाको गौरादह ९ वैगुन्धुरा स्थित मृगौला पीडित बोधराज खनालको स्वास्थ्य अवस्था अत्यन्तै कमजोर हुदै गएको छ । दुबै मृगौला खराब भई उपचारको लागी नोबेल अस्पताल विराटनगरमा विगत १ महिना देखी...
सीप र संस्कारयुक्त शिक्षामा सप्तश्री एकाडेमीको जोड
दमक,११ चैत । झापाको दमक ९ स्थित सप्तश्री एकाडेमीले सीप र संस्कारयुक्त शैक्षिक पठनपाठन सञ्चालन गरिआएको जनाएको छ । गएको वर्षदेखि सञ्चालनमा आएको सो एकाडेमीले आज दमकमा पत्रकार सम्मेलन गरि शैक्षिक गुण स्तरसंगै विश्व वजारमा...
एसईईमा पौने पाँच लाख परीक्षार्थी सहभागी
झापा,१० चैत । यस वर्षको माध्यामिक शिक्षा परीक्षा (एसईई )देशैभरी सुरु भएको छ । आजआइतबार बाट सुरु हुने परीक्षामा कुल चार लाख ७५ हजार तीन परीक्षार्थी सहभागी भएका छन् । गत २०७४ सालमा चार...
मेची बोर्डिङमा अभिभावकहरुका लागि अभिमुखीकरण
दमक,९ चैत । झापाको दमक ५ स्थित मेची सेकेण्ड्री बोर्डिङ स्कूलले विद्यार्थीहरुमा घरैदेखि सकारात्मक शैक्षिक वातावरण जागृत गराउने उद्देश्यले अभिभावकहरुका लागि अभिमुखीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ । स्कूलले आज आयोजना गरेको सो अभिमुखीकरणमा बाल...
भन्नुहोस् त, तपाईसँग भएको सबैभन्दा मूल्यवान् चिज के हो ?
– तीर्थ तिम्सिना एकैछिन् एकाघ्र भएर सोच्नुहोस् त, तपाईंको एउटा हातको औंलाको मूल्य कति होला ? एक लाख, दुईलाख या पाँच लाख ? के तपाईं आफ्नो औंलाहरु तिन लाख रुपैयाँमा बेच्न चाहनुहुन्छ ? आँखा नि...